Kubvisa stock. Apple Watch Series 3 Nike Edition 42mm kweanopfuura mazana matatu maeuro | Ndinobva mac
Musoro wenyaya ino unotaura zvese. Zvinotaridza kuti zvitoro zvinoramba zvichingova nazvo inowanikwa stock yeApple Watch Series 3Ivo vanoda kuwana zvakazara kubva mairi Cupertino vakomana vasati vatanga modhi nyowani svondo rinouya.
Kupihwa kwatakawana kweApple Watch Series 3 Nike Edition 42mm mune sirivheri kuri kuyedza chaizvo. Iwachi nyowani, iine garandi yegore rimwe uye zviri pachena kuti ichatumirwa kwatiri kubva kunze kweSpain, asi chitoro chinotengesa icho chakavimbika uye inounganidza huwandu hwakawanda hweanopfuura makumi matanhatu mawachi akafanana neaya akatengeswa.
Kuva nesheya kwakanaka asi ikozvino isu tinofanirwa kuiburitsa
Ndo izvo vatengesi vazhinji vari kunze kweApple zvitoro zvepamutemo vanofanirwa kunge vachifunga nemawachi ese avanayo muchitoro. Mune ino kesi, iko kupihwa isu hatizive kuti ingagare kwenguva yakareba sei ichishanda, chatinoziva ndechekuti inogona kuve yakakodzera kuve neiyi Apple Tarisa Nike Edition ye305,99 euros pasina mari yekutumira uye nekwaniso ye kubhadhara kuburikidza nePayPal.
Kupihwa kuri kubva eBay uye isu tinosiya chinongedzo pano kuitira kana iwe uchichifarira. Ichokwadi kuti rairo ndeyekumirira iyo modhi nyowani kuti iunzwe wozoona zvinoitika nemitengo uye nezvimwe, asi ndezvekuti kupihwa kweaya maitiro kunoratidzika kunge kwakanaka kwatiri. Izvi zvakafanana zviri kutengeswa kuApple Apple Tarisa Nike +Aluminium kesi mune sirivheri ye399 euros, zvinoreva kuponeswa kweanosvika zana maeuro pakutenga wachi imwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kubvisa stock. Apple Watch Series 3 Nike Edition 42mm kweanopfuura mazana matatu maeuro
Zvinotonyanya kuitika kuti neChipiri iyo € 100 ichaderedzwa muAppleStore, iine makore maviri vimbiso uye, kana ikakubata padhuze, muchitoro chemuviri. Kana iwe wakakwanisa kumirira gore, iwe unogona zvirokwazvo kumirira mazuva mana.
Pixelmator Pro inovandudzwa kuti ishandure 1.1.4 uye inoderedza mutengo wayo neinenge hafu